काठमाडौं । रियलमीले नेपालमा ‘रियलमी६’ र ‘रियलमी ६आई’ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । बिहीवार नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ स्मार्ट फोन रियलमी५ प्रो र रियलमी५ आई सक्सेसरमा निर्माण गरेको कम्पनीले बताएको छ ।
रियलमी६ ले क्यामेरा, डिस्प्ले र पर्फमेन्शमा धेरै अपग्रेडहरू ल्याएको छ भने रियलमी ६आई मा अधिक पर्फमेन्श, उत्कृष्ट क्यामेरा र नयाँ डिजाइनमा रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
गेमिङका लागि शक्तिशाली प्रोसेसरयुक्त ‘रियलमी६’ ८ जीबी ¥याम र १२८ जीबी स्टोरेजका साथ रू. ३२ हजार ९९० मा उपलब्ध छ । ४ हजार ३०० एमएएच ब्याट्री, ६४ एमपी एआई क्वाड मुख्य र १६ एमपी सेल्फी क्यामेरा यो फोनमा छ । शक्तिशाली मिडियाटेक हेलियो जी ९० टी एसओसी, ६.५ इन्च ९० हर्ज अल्ट्रा स्मुद डिस्प्लेद र ३० वाट प्mल्यास चार्ज यो फोनको विशेषता हो ।
यस्तै ‘रियलमी६ आई’ ४ जीबी ¥याम र १२८ जीबी स्टोरेजका साथ रू. २५ हजार ९९० मा उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । शक्तिशाली मिडियाटेक हेलियो जी ८० एसओसी, ६.५ इन्च एचडी प्लस मिनी–ड्रप डिस्प्ले, ४८ एमपी एआई क्वाड क्यामेरा, ५ हजार एमएएच ब्याट्री र १८ वाट फास्ट चार्जिंग क्षमता यसको विशेषता भएको कम्पनीले बताएको छ ।